ओलीविरूद्ध ‘कू’को प्रयास विफल, मदनको विरासत पाउन प्रचण्डले अब के गर्ने ? - || वर्णन मिडिया - संवाहक सूचना तथा समाचारको ||
२०७७ असार २४, बुधबार ०३:११:००
नेकपामा तत्काललाई स्थायी समिति कुरुक्षेत्र बन्नबाट रोकिएको छ र अस्थायी युद्धबिराम सुरु भएको छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा ओलीविरुद्ध कू गर्ने प्रयास असफल भएको छ । तर तत्काललाई महाभारत मत्थर भए पनि सम्पूर्णतः युद्ध टरिसकेको छैन ।
अहिलेको युद्धबिरामका पछाडि नेकपाभित्र नजानिँदो प्रकारले विकसित भएको नयाँ शक्ति समीकरण र चिनियाँ राजदूतको दौडले पनि काम गरेको प्रस्ट छ । तर दक्षिणी शक्तिको चलखेल नरोकिएको र झलनाथ खनाल, माधव नेपाल र वामदेव गौतमजस्ता अतृप्त आत्माहरु भड्किइसकेका कारण ओलीलाई गलहत्याउने कोशिस फेरि पनि हुनेछ ।
आफ्नै घर जलाएर आगो ताप्नु नेपाली राजनीतिको एक नियमित आकस्मिकता पनि हो । त्यसमाथि परालको पुतला बनाएर भए पनि वर्गशत्रु घोषणा गरी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको अभ्यास गर्ने अभिमुखीकरण भएका कम्युनिस्टहरु गान्धी भएर निस्कने कल्पना गर्न पनि सकिँदैन । यही कारण नेपाली जनताले पटकपटक धोका खाएका छन् र देशले मूल्य चुकाएको छ । अझै चुकाउँदै छ ।
बारम्बार दोहोरिएको इतिहासको यो क्रम उल्टाउने हो भने त्यो प्रचण्डले मात्र सक्छन् । किनभने, अवसर उनकै सामुन्ने आएको छ । कसरी त ? हेरौँ, यो परिदृश्य–
नेपालका राजनीतिक दलहरु ऐतिहासिक रुपमै नेतृत्व संकटबाट गुज्रिएका छन् । २०७२ को संविधान जारी गर्ने क्रममा केपी शर्मा ओलीले केही हदसम्म नेतृत्व क्षमता देखाएका हुन् । त्यसवापत उनले जनताबाट तुरुन्तै पुरस्कार पनि पाए । करिब दुई तिहाईनजिकको बहुमतको सरकार बनाउने मौका पनि उनले पाए । तर त्यसअनुकूल उनले शासकीय क्षमता र कौशल देखाउन सकेनन् । यसले चौतर्फी असन्तोष जन्माएको छ । र, देशले फेरि एक सपुतको खोजी गरिरहेको छ ।
ओलीप्रतिको असन्तोषलाई उनकै पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्ड भने अव्यावसायिक र अनैतिक तवरले आफ्नो स्वार्थमा भजाउन खोज्दै छन् । यसले आफ्नो कद झनै घटाउँदै छ भन्ने प्रचण्डले बुझेका छैनन् या बुझेर पनि फेरि मौका नआउने हो कि भन्ठानेर बुझ पचाएका छन् । तर, उनी वास्तविक राजनेता बन्न चाहन्छन् भने उनले बुझ्नुपर्छ, आफ्नै पार्टीको नेतृत्वलाई असफल बनाएर अहिलेसम्म कोही पनि माथि चढ्न सकेको छैन । कुनै शक्तिको आडमा क्षणिक रुपमा लाभ लिन सके पनि केही समयमै तिनको पत्तासाफ भएको छ ।
किशुनजीलाई असफल बनाउँदा गिरिजाप्रसाद कोइराला ८० वर्षे उमेरमा सडकमा डण्डा खाएर हिँड्नुपर्यो । कोइरालाको विरासत सिध्याउन दरबारको आड लिन पुगेका शेरबहादुर देउवालाई राजा ज्ञानेन्द्रले बिरालो मुसा खेलाएझैँ खेलाए
माधव नेपाल र झलनाथ खनाल एक अर्काका विरुद्ध पालैपालो प्रयोग हुँदा दुवै अहिले अस्तित्वको लागि संघर्ष गर्दै छन् । तराईका क्षेत्रीय दलहरु सम्पूर्ण शक्ति लगाएर एकअर्काको गर्धन छिनाल्न तम्सिँदा नेपाली राजनीतिमा क्षेत्रीय उत्पीडनको आन्दोलन नै धूलीसात् बन्यो । प्रचण्डलाई शून्यमा पुर्‍याएर आफू शिखर चढ्न खोजेका बाबुराम भट्टराई कमण्डलु लिएर कांग्रेसको छहारीमा पुग्नुपर्ने अवस्था आयो ।
मोहनविक्रम सिंह, मोहन वैद्य, चित्रबहादुर केसी, नेत्रविक्रम चन्द लगायतका विचित्रका पात्र छन्, जो आफ्नै कोठे चिन्तनबाट विश्व चल्नुपर्छ भन्ठान्छन् तर आफ्नै चारजना कार्यकर्ता चार महिनासम्म आफूसँग राख्न नसक्ने हैसियतमा पुगेका छन् ।
माधव नेपालसँगको रिस फेर्न देखाइदिन्छु भन्दै एमाले छाडेर हिँडेका धेरै माले नेता तथा कार्यकर्ताले राजनीतिबाटै सन्यास लिनुपर्ने अवस्था आएको सन्दर्भ पनि धेरै पुरानो भएको छैन । वामदेव गौतम पनि अहिले त्यसैको मूल्य चुकाउनुपर्दा छट्पटाइरहेका छन् ।
अहिलेकै कार्यशैली कायम रहेमा प्रचण्ड पनि मोहनविक्रम र मोहन वैद्यको हालतमा पुग्न धेरै समय लाग्ने छैन । आखिर यी दुवैजना प्रचण्डका राजनीतिक गुरु पनि हुन् ।
तर, प्रचण्डले बुद्धि पुर्‍याएमा मदन भण्डारीको स्थान प्राप्त गर्ने ऐतिहासिक अवसर उनका सामु छ । प्रचण्ड मदन भण्डारी बन्ने हो भने सबभन्दा पहिला आफू बसेको घरभित्र आगो झोस्ने काम बन्द गर्नुपर्छ ।
पाहुना बनेर पसेका उनी घरधनी बनेर निस्कनुपर्ने अवस्था छ । नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ताको मन नजिती उनी यस संगठनको नेता बन्न सक्दैनन् ।
नेकपाभित्रै पक्ष विपक्ष खडा गर्ने, एकअर्काविरुद्ध दुश्मनी सिर्जना गर्ने अनि पार्टी विभाजनसम्म विनाशकारी परिस्थिति ल्याउने प्रमुख कारक प्रचण्ड बन्ने हो भने पूर्वएमाले पंक्तिले उनलाई वर्गशत्रु घोषणा गर्न बेर लाग्ने छैन ।
भित्रभित्रै परिस्थिति यही दिशातर्फ मोडिँदै छ । यति युद्धबिराम गरी ओलीसँग उनी वार्ता गर्न बालुवाटार नपुगेका भए अहिलेसम्म यही स्थिति देखापरिसक्ने थियो । ओलीविरुद्ध कू गर्न खोज्दा आफै धरापमा पर्नबाट जोगिएकामा चिनियाँ राजदूतलाई पनि प्रचण्डले धन्यवाद भने हुन्छ ।
प्रचण्डले बारम्बार आफूलाई मदन भण्डारीसँग तुलना गरेका छन् । मदन भण्डारीका विचारको प्रशंसक भएको बताएका छन् । एमाले नेताहरुले मदनपथ भुलेको भनेर पनि उनले आलोचना गरेका छन् । वास्तवमा यो सही पनि हो । नेकपामा मदन भण्डारीको वैचारिक उत्तराधिकारी कोही बन्न सकेको छैन ।
त्यही कारण एमाले पंक्ति नेतृत्वविहीनतामा गुज्रिरहेको छ । त्यो स्थान लिन प्रचण्डले गम्भीरतापूर्वक कोसिस गरेमा उनी सफल हुने ठाउँ छ । त्यसका निम्ति पहिला उनले मदन कसरी मदन भएर भनेर बुझ्नु आवश्यक छ ।
प्रचण्डले अहिले जुन व्यवहार देखाइरहेका छन्, त्यस्तै छुद्रता, आत्मकेन्द्री मानसिकता र विध्वंशक छवि प्रस्तुत गरेका भए मदन एक मामुली कम्युनिस्ट कार्यकर्तामै सीमित हुने थिए ।
उनले समयको स्पदन बुझेर तत्कालीन मालेलाई खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धात्मक धारमा अभ्यस्त तुल्याए र जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम अघि सारे । आफूले ल्याएको कार्यक्रमलाई नयाँ विचारधाराका रुपमा आफै देशव्यापी प्रचारमा जुटे ।
२०४७ पुस २२ मा तत्कालीन नेकपा माले र माक्र्सवादी मिल्दा उनले कुखुराको जत्रो छाती बनाएनन् । मनमोहन अधिकारीलाई पार्टी अध्यक्ष बनाए ।
मनमोहनप्रति देखाएको श्रद्धा र उदात्तताका कारण माक्र्सवादीका सबै कार्यकर्ता मदनलाई नेता मान्न तयार भए । मनमोहन अधिकारीलाई शिरमा बोकेरै मदन हिँड्दा एकातिर सारा कार्यकर्ता पंक्तिको विश्वास जित्न सजिलो भयो, अर्कोतिर त्यसले उनको कद घटाएन, झन् बढायो ।
बस्, अहिले प्रचण्डले यति गरे पुग्छ । पार्टी अध्यक्ष उनी छँदै छन् । आफूले पूर्ण कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने पहिला उनले पूर्ण प्रधानमन्त्रीय अधिकार प्रयोग गर्न ओलीलाई छाडिदिनुपर्छ ।
ओलीले पार्टीभित्रबाट जजसलाई मन्त्री बनाउन चाहन्छन्, बनाउन दिए हुन्छ । आखिर जो भए पनि उनकै पार्टीबाट हुने हुन् । बरु प्रचण्डले योग्यता, समावेशिता लगायतका मापदण्ड र नीति बनाउन सहयोग गरिदिए हुन्छ ।
फेरि पनि मेरी बुहारीका बारै टक्का भन्न थालेमा प्रचण्ड त्यहीँनिर कमजोर बन्नेछन् । जनार्दन शर्मालाई पाखा लगाएर शक्ति बस्नेत, वर्षमान पुनजस्ता स्वकीय सचिव बन्ने क्षमता पनि नभएकाहरुलाई अगाडि बढाउन खोजेमा त्यसले पूर्वमाओवादी समूहभित्रै प्रचण्ड अल्पमतमा पर्न सक्नेछन् । त्यस्तो अवस्थामा एमाले पंक्तिले उनलाई नेता थाप्ने कुरै छैन ।
ओलीलाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्न सार्वभौम अधिकार दिएर प्रचण्डले सल्लाहकार एवं अभिभावकको भूमिका खेल्न सकेमा राजनेता बन्ने यात्रा त्यहीँबाट सुरु हुनेछ ।
ओली सरकारका हरेक कामको अपनत्व लिने हो, जस अपजस खप्न तयार हुने हो भने प्रचण्डले गुमाएको अविश्वास फिर्ता पाउनेछन् । संगठनलाई चलायमान बनाइराख्ने, देश दौडाहा गरी हरेक कार्यकर्तासँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने, जनताका पीर मर्कासँग एकाकार बन्ने सुनौलो मौका पनि प्रचण्डलाई आएको छ ।
ओलीले यतिका समय प्रधानमन्त्री खाए, राज्यस्रोतमा रजाइँ गरे भनेर प्रचण्डले टाउको दुखाउन थालेमा उनी राजनेता त परै जाओस्, नेकपाकै नेता पनि बन्न सक्ने छैनन् । पहिला उनी नेकपाको नेता बन्ने प्रयास गर्नुपर्छ । त्यसपछि मात्र उनलाई राजनेता बन्ने मार्गको ढोका खुल्नेछ ।
ओलीसँग ससाना छुद्र कुराहरुमा सिँगौरी खेलेर बस्ने हो भने प्रचण्ड लामो दौडको यात्रा तय गर्न सक्ने छैनन् । पार्टीभित्र अन्याय वा गडबडी भएमा प्रचण्डबाहेक पनि धेरै नेता कार्यकर्ता छन्, जसले ओलीमाथि औँला उठाउन छाड्ने छैनन् ।
प्रचण्ड फौजी संगठनमार्फत् देशव्यापी भूमिगत आन्दोलन चलाउन सफल भए पनि खुला राजनीतिक संगठन चलाउन उनी असफलसिद्ध भइसकेका छन् ।
खुला र लोकतान्त्रिक अभ्यासको लामो प्रक्रियाबाट गुज्रिएको एमालेको संगठनसँग भिज्ने कोशिस गरेमा प्रचण्डको त्यो कमजोरी अब नदोहोरिन सक्छ ।
गएको चुनावको प्रचण्ड जनमतको जगमा ओली सत्तामा पुगेका हुन् । कम्तीमा ५ वर्ष उनले सरकार चलाउन पाउनु न्यूनतम लोकतान्त्रिक सर्त पनि हो ।
त्यसमाथि विगतका दशकहरुमा बर्सेनि सरकार फेर्ने प्रवृत्तिबाट आक्रान्त नेपाली जनमत ओलीको विस्थापनको पक्षमा छैन । ओलीले अनि नै गरेमा जनता नै सडकमा आएर खबरदारी गर्न तयार छन् भन्ने इनफ इज इनफ आन्दोलनले देखाइसकेको छ ।
अझ त्यसमाथि ओलीसँग गनगन गर्न माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतम पनि पर्याप्त छन् भने त्योभन्दा तल्लो स्तरमा झरेर प्रचण्ड ओलीविरुद्धको षड्यन्त्रमा लाग्नुपर्ने अवस्था वा बाध्यता दुवै छैन ।
बरु महाधिवेशन आउँदै छ । कसरी छिटो महाधिवेशन गर्ने भन्नेतिर प्रचण्डको ध्यान जानुपर्छ । अबको डेढ वर्षमा आमनिर्वाचनको माहोलमा मुलुक प्रवेश गरिसक्नेछ ।
त्यतिञ्जेल ओलीको परीक्षा पनि जनताले गरिसकेका हुनेछन् । आगामी महाधिवेशनमा ओली आफै अध्यक्षमा नउठ्ने घोषणा गरिसकेका छन् । त्यसमा बरु नैतिक रुपमा बाँधिन सक्ने अवस्था प्रचण्डले सिर्जना गर्न सक्छन् ।
स्वास्थ्यका कारण पनि ओलीलाई आगामी महाधिवेशनबाट सम्मानजनक स्थानमा राखेर आरामको अवसर दिनु उचित हुनेछ ।
तर ओलीविरुद्ध कू गर्ने षड्यन्त्रमा सामेल भई अवैध रुपमा शक्ति हत्याउने खेल प्रचण्डले खेलेमा त्यो उनकै लागि आत्मघाती हुनेछ ।
एमालेको खरानीमा महल ठड्याउने प्रचण्ड महत्त्वाकांक्षा